The homicide of Laurent-Désiré Kabila, a mystery
Duqa magaalada Garowe ayaa sheegay in dadka lala socdo
Magaalada Baydhabo waxaa ku kulmay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed & Odoyaasha dhaqanka DG Koofur Galbeed si uu ugu bandhigo Ololihiisa doorashada 20/21.
Odoyaasha dhaqanka ayaa dhankooda Shariif Sheekh Axmed la wadaagay welwelka ay ka qabaan hadallada xanafta leh oo ay is dhaafsanayaan Dowladda Federaalka & Musharixiinta Hogaamiyaha 20/21.
Waxgaradka ayaa ka digay foodo iyo kala dambeyn la’aan ka dhalata Doorashada 20/21 in dalka loo horseedo, sidaas awgeed waxa ay baaq wadajir ah u jeediyeen Dowladda Federaalka & xubnaha Xildoonka ah.
Suldaan Warsamo Cali Ibrow oo ku hadlay Afka Odoyaasha ayaa soo jeediyay in miiska wadahadalka lagu dhammeeyo cabashada ka dhalatay hab maamulka Doorashada Soomaaliya 20/21.
“Dhammaan Musharixiinta Soomaaliyeed waxa aan xusuusineynaa in geed dheer & mid gaaban Odoyaasha dhaqanka ay usoo koreen dhismaha Dowladda Soomaaliya, sidaas awgeed lama aqbali karo in Dowladda & Musharixiinta ay dalka dib u celiyaan” Sidaasi waxaa yiri Suldaan Warsame Cali Ibrow.
Fariinta Odoyaasha dhaqanka ee DG Koofur Galbeed ayuu sheegay Suldaan Warsame in ay xusuustaan dhibaatada dalka ka jirta iyo dhacdooyinka damqashada leh ee dalkaan soo maray sida uu hadalka u dhigay.
“Dowladda Federaalka waa in ay la fadhiisataa dadka cabashada qaba si loo dejiyo xaaladda siyaasadeed, Musharixiinta waxa aan leenahay dalka uma wanaagsana hadallada xanafta leh ee sababi kara kacdoon in la joojiyo, qofkii ilaah ugu talagalay ayaa dalkaan maamulaya, mana ahan in sifo aan wanaagsaneen loo maro” ayuu markale yiri Suldaan Warsame Cali Ibrow.
Shariif Sheekh Axmed ayaa ololaha doorashada ka bilaabay Deegaannada DG Koofur Galbeed, waxa uu la kulmay madaxweynaha, mas’uuliyiin & qaybaha kala duwan ee dhaqanka si uu uga gado aragtidiisa Doorashada.
axadle 5798 posts
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay